बामदेव गौतम हराए, ‘बाम(देव) पन्थी’ चरित्रको जगजगी ! « Nepal Bahas
बामदेव गौतम हराए, ‘बाम(देव) पन्थी’ चरित्रको जगजगी !
विवादसँग झुत्ती खेल्न रमाउने बामदेवलाई कसैले निर्विवाद भन्नु चोर कुरा हो, यही नै उनलाई चिनाउने विशेषता हो
प्रकाशित मिति : २५ पुष २०७८, आईतवार ११:१३
“एमालेमा ओली रहुन्जेल त्यो पार्टीमा फर्केर जाँदै जान्न…..” भनेर एमालेका दुवै भँगालो पार्टीबाट अलग र तटस्थ बसेका पूर्वएमाले नेता बामदेव गौतम राजनीतिक गतिविधिबाट यतिबेला हराएका छन् । एमाले र माओवादीको एकता, पानी र मट्टितेल एउटै बोतलमा राखे पनि मिसिएर बस्न नसकेको झैं फुट्यो । यो एकीकरणका एक सूत्रधार बामदेव भैंसेपाटीस्थित आफ्नो निवासमा असफलताबोधका साथ बसिरहेका होलान्, चालचुल कतै छैन ।
दुई पार्टीको एकता त फुट्यो नै, एमाले नै महाभारतमा जरासन्ध राक्षस शीरदेखि पुच्छरसम्म फुटेर दुई फ्याक भएकै बान्कीमा फुट्यो । त्यसका चल्तापूर्जा नेता बामदेव र उनको स–सानो समुह पनि करिब एक वर्षयता राजनीतिक परिदृश्यबाट गयल भईरहेको छ । यो एकतामा बामपन्थी पहिचानमात्र होइन ‘बामदेवपन्थी’ चरित्र पनि छर्लङ्ग देखिन्थ्यो ।
बामदेव नेपाली राजनीतिमा एउटा व्यक्ति वा कम्युनिस्ट नेतामात्र नभएर प्रवृत्ति वा चरित्रको नाम हो । उनलाई विगतमा के मात्र वात लागेन ! बामदेवसहित माले महासचिव सी.पी. मैनालीले एमाले पार्टीलाई फुटाएर ‘ने.क.पा. (माले) गठन गरेकै हुन्, जसलाई एमाले पक्षकाले नेकपा–माले नभनेर बामदेव र सीपीको नामको पहिलो अक्षर लिंई ‘बासी गुट’ भन्ने गर्थे ।
‘बासी गुट’ले एमालेको मूलघरमा रहेका नेताहरूलाई अहोरात्र ‘चरम राष्ट्रघाती’ भनी आरोप लगाएकै हो । बामदेव त एउटा व्यक्ति हुन् । उनलाई बोक्ने, पालनपोषण गरेर प्रधानमन्त्रीको अवैध वा अनैतिक आकांक्षी बनाउने दोषी, नेकपा (एमाले) र धेरै हदसम्म माओवादीले दोषबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।
एमालेको विशेष आयोजनामा २०५४ साल चैत्र २६ गते जनआन्दोलन दिवस मनाउन काठमाडौँको खुलामञ्चमा विशाल आमसभा गरी ‘नेपालका ३ सय महाभ्रष्टहरूको सूची’ पढेर सुनाइयो, जुन सूचीको ‘एकनम्बर भ्रष्टाचारी’मा बामदेव नै परेका थिए । भ्रष्टाचारीको नामावली वाचन गर्नेमा एमालेकै चल्तापूर्जा नेता प्रदीप नेपाल थिए ।
त्यसअघि एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा ईश्वर पोखरेलले बामदेवमाथि २१ वटा संगीन आरोप लगाउँदै, पार्टी चलाउँदा जुवाडे शैली अपनाएको, सुरा–सुन्दरीको राजनीति गरेको, सून तस्करीलाई प्रश्रय दिएको जस्ता आपराधिक क्रियाकलापको सूची पेश गरेका थिए । पूर्व आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको संस्मरण (पुस्तक) मा आफूलाई आईजीपी बनाउन २० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप उनले लगाएका छन् ।
आफ्नै पार्टीको निर्वाचित सांसदलाई जनतासामु नाङ्गेझार पार्दै जनमतको अपमान गर्ने पञ्चतन्त्रको बाँदर शैली ‘बामदेवपन्थी चरित्र’ हो । यो चरित्रको लागि बामदेव जति बदनाम भए, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली कम बदनाम भएनन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं र रौतहट दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाललाई यसैगरी आफ्नै सभासद सुशीलचन्द्र अमात्यलाई हटाएर संविधानसभामा पुर्याएर प्रधानमन्त्री बनाएको लोकतन्त्रघाती खेल जनताले बिर्सिहालेका छैनन् । त्यसरी आएका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलका निर्णायक खेलाडी, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ऊर्फ प्रचण्ड हुन् ।
तीनपल्ट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भईसकेका बामदेवलाई निम्नकोटीको मरिहत्ते गरेर संसदमा ल्याउने अपराधिक मनोवृत्तिको अभ्यास आकस्मिक रुपमा भएको थिएन, कम्युनिस्ट घटकभित्र धेरै अगाडिदेखि चल्दै आएको थियो । नागरिक समाजको कडा विरोध र आलोचनाले गर्दा २०७५ मा तत्कालीन एकीकृत ने.क.पा नै छिःछिः दूरदूरको पात्र हुन थालेपछि बाध्य भएर काठमाडौँ ७ नम्बर क्षेत्रबाट बामदेव उम्मेद्वार हुने निर्णय थन्कियो । तर निर्णय त्याग्दैमा नियत त्यागियो भन्न सकिन्न ।
नियत त्यागिएको भए चुनावमा पराजित माधव नेपाल चोरबाटो गरी संविधानसभामा पुग्दा जनताले गरेको निन्दा र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै बामदेवको हकमा दोहोरिन छुट हुने थिएन । तर वामपन्थी पार्टीभित्र लज्जास्पद बामदेवपन्थी निर्णय निर्लज्ज तरिकाले दोहोरिरहेका छन् । यस्ता निर्लज्ज तर लज्जास्पद प्रकरणबाट एमाले अध्यक्ष ओलीले शिक्षा र सावधानी लिएको पटक्कै अनुभव हुँदैन ।
२०७५ मा डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढाले बामदेवलाई सांसद बनाउन निर्वाचन क्षेत्र (डोल्पा) खाली गरिदिने र उनलाई चुनाव जिताएर ल्याउने बाचाका लागि बामदेवको भागबण्डामा परेको पर्यटन राज्यमन्त्री पद बुढाले पाएको धुमधाम प्रचार भएकै हो, जसबाट मन्त्री हुन नेकपाभित्र यस्ता सर्त र भागबण्डा पनि चल्दछन् भन्ने जगजाहेर हुन आयो । सांसद बुढाले जब जिब्रो फेरेर कुरा गर्न थाले, त्यसपछि बामदेव अन्य निर्वाचन क्षेत्रतिर विकल्पको दृष्टि लगाउन थाले । यस सिलसिलामा नेकपाका अन्य सांसदहरू बाँके–३ का नन्दलाल रोकाय, दैलेख–१ का रवीन्द्र शर्मा र रुकुम पूर्वकी कमला रोकालाई बलीको बोको बनाउने असफल धृष्टता भएको थियो ।
काठामाडौँ–७ बाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका एमाले सांसद रामवीर मानन्धरले आफू निर्वाचित क्षेत्रबाट बामदेवका लागि राजीनामा दिँदा मतदाताको उपरोक्त मनोविज्ञान बुझ्न सकेको देखिएन । उनलाई २५ करोड रुपैयाँ खाएर चुनाव क्षेत्र खाली गर्न तयार भएकोदेखि जनताको भरोसा गुमाएका अनेकौँ वात लागेको सुनिन्थ्यो ।
२०७२ का भूकम्पपीडितको राहतका लागि वांग्लादेश सरकारले पठाएको र झापाको गोदाममा थन्क्याईएको १० हजार मेट्रिक टन चामल बामदेव नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले जालसाँजी गरेर ५ हजार टन मात्र देखाउन खोजेको थियो । सञ्चारमाध्यमले आवाज उठाएपछि ‘गल्तीले ५ हजार भएछ, तर १० हजार मेट्रिक टन नै हो’ भनी पछि सच्याइयो । बांग्लादेशले नै पठाएको ५९ हजार थान कम्बलमध्ये २ हजामात्र देखाएर ५७ हजार कता गायब बनाइयो, आजसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
भूकम्पपछि क्याबिनेट मिटिङमा भूकम्प पीडित प्रत्येक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दरले सहायता दिनुपर्छ भनेर बामदेवले जोड गरे ।भूकम्प पीडितलाई मुलुकको सम्पत्ति त्यसरी लुटाएपछि अन्य क्षेत्रका जनताले के पाउने ? यो विषयलाई लिएर गृहमन्त्री बामदेव र अर्थमन्त्रीबीच क्याबिनेट मिटिङ्मै चर्काचर्की भयो । बामदेव राज्यको ढुकुटी भूकम्प पीडितका नाममा लुटाउन चाहने, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पीडितलाई राज्यले न्यायोचित रुपमा दिनुपर्ने सहायता दिन पनि बाउको सम्पत्ति दिनुपरेको जस्तो भएर सन्किने ! आखिर २ लाख रुपैयाँ दिने, काज–किरियाको लागि प्रत्येक मृतकका परिवारलाई रू ४० हजार दिने र तत्काल टहरा बनाउन रू १५ हजार दिने निर्णय भयो ।
बुहारीले दाइजो ल्याएको सम्पत्ति ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको देखाउने, शहीदका छोराछोरीलाई पढ्न छुट्याएको छात्रवृत्ति कोटामा एसएलसीमा फेल भएको आफ्नो छोरोलाई एमबीबीएस पढाउन चीन पठाउने, आदि कुन काम उनले हास्याँस्पद रुपमा नगरेका होउन् । एकताका सीपी मैनाली एमालेमै हुँदा उनले ‘अनुशासन तोडेको’ आरोप लगाएर ‘अनुशासन तोड्नेलाई छाला काडेर नून–चुक दलिने छ’ भन्ने उनैले महाकाली सन्धि गर्दा त्यसको विरोधमा ‘अन्तरात्माको आवाज’ भनी पार्टीको ह्विपमात्र तोडेनन् सीपीसँगै पार्टी नै फुटाएर हिँडेकै हुन् ।
रुसी कम्युनिष्ट पार्टी जुगानोभसँग दिल्लीमा भेट हुँदा उनले बामदेवलाई सोधेछन्, ‘तपाईँको देशमा गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि सशक्त रुपमा छन्, उनीहरूसँगको प्रतिष्पर्धामा तपाईँहरू कसरी जित्नुहुन्छ ?’ जवाफमा यिनले भने, ‘हाम्रा भनाइमा चलुन्जेल ठीकै छ, तर बाधा–व्यवधान हाल्न आए भने हामी ती सबैलाई खाल्टो खनेर एकैठाउँमा पुरिदिने छौँ ।’ कालान्तरमा उनले ‘खाल्टो खनेर पुर्नुपर्ने’ पक्षका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा ‘च–माले’ सरकार बन्यो, उनी त्यही सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।
चमाले सरकारका निर्णायक हर्ताकर्ता बामदेवको खटनमा भएको २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन यति कुख्यात र रुखो भएको थियो कि त्यो नै २०७४ को स्थानीय निर्वाचन नहुन्जेलसम्मको लागि अन्तिम चुनाव भयो । आईजीपी भएको ३६ दिनमै स्थानीय निकायको मुखैमा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर दीपक मलहोत्राको ९ करोड रुपैयाँको लगानी थैली हात पारेर ध्रुबबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको घटना निकै चर्चित भयो । हुन त सो पैसाबाट एमालेको पार्टी कार्यालय पनि बनेकै हो, जुन भवन ०७२ को भूकम्पमा परी कामै नलाग्ने रुपमा छियाँछियाँ भयो । पछिल्लो समयमा उनैले मच्चाएको ‘रबिन्सन प्रकरण’ भनेजस्तै लागुऔषध कारोबारमा मुछिएको रंगेहात पक्राउ परेका तत्कालीन डीएसपी नरहरि संग्रौलालाई पुनःबहाली गरेर पनि यिनले ‘नाम’ र दाम कमाएकै हुन् ।
बामदेव भारतीय सेनामा भर्ती पनि भए । सन् १९७० मा बांग्लादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतको सैन्य हस्तक्षेप हुँदा भारतीय सेनाका जवान बामदेव पनि बांग्लादेशमा भारतीय सैनिक कारवाहीको बलमा खटिए । तर उनी त्यो संग्राममा नगएर भारतीय सेनासमक्ष राजीनामा लेखेर स्वीकृति नपर्खी नेपाल आए र रुपन्देहीमा एक जमिन्दारको घरमा हलीको भेषमा बसे । यसलाई उनी आजकाल भूमीगत जीवन भनी परिभाषित गर्छन् । भारत उनलाई ‘भगौडा सिपाही’ को रुपमा चिन्छ ।
राजतन्त्रकालमा बामदेव गौतमको तत्कालीन राजदरबारसँग कति साँठगाँठ थियो भन्ने कुरा दरबारका सैनिक सचिव रहिसकेका विवेकबिक्रम शाहद्वारा लिखित ‘मैले देखेको दरबार’ नामक चर्चित पुस्तकका यी हरफबाट बुझ्न सकिन्छ— ‘….बामदेव गौतम र राधाकृष्ण मैनाली पार्टीसँग असन्तुष्ट र ज्यादै निराश हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । बामदेवलाई माओवादीले समेत आफ्नो सहयोगीको भूमिकामा ल्याउन खोजिरहेको छ । हामीले कुनै पनि हालतमा उहाँलाई आफ्नो पक्षमा राख्नुपर्छ…..’ (‘मैले देखेको दरबार’ पुस्तकमा विवेककुमार शाह पृ. ३९८) ।……‘बामदेव गौतम र राधाकृष्ण मैनाली पार्टीको रबैयाबाट दिक्क भएर पार्टी त्याग्नसक्ने अवस्थातिर उन्मूख हुनुहुन्छ । साथै गौतमलाई निकै आर्थिक संकट परेको छ । उहाँलाई आर्थिक सहयोग गर्नु उचित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ…..’ (ऐँ ऐँ पृ. ४२९) ।
‘….एमाले नेताहरू के.पी. शर्मा ओली र बामदेव गौतम देशमा शान्ति स्थापना गर्न र राष्ट्रहितको लागि महाराजाधिराज सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट भएको छ । विभिन्न माध्यमबाट यसका निम्ति कोशिश भइरहेको थियो । अब सफलता मिल्ने संकेत छ । यो पनि खुशीकै खबर हो ……’ ( ऐँएैँ पृ. ४५६) । ‘….बामदेव गौतमले आज मसँगको भेटघाटमा धेरै विषयमा कुरा गर्नुभयो ।…..मैले पहिले पनि दरबारलाई सहयोग गरेको हूँ, अब पनि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छु । पार्टीले कारवाही गरे गरोस् मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन…..’ (ऐँऐँ पृ. ४८५) । ‘…..महाराजाधिराजले कि लिनुपर्यो कि त दिनुपर्यो । हामीहरू एमोलेलाई फुटाएर गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्न तयार भएका बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई राजीनामा गर्न लगाइयो । यो कदम सही भएन । अझै पनि पार्टी फुटाएर केपी शर्मा ओलीलाई सरकारमा ल्याउन सके, अवश्य पनि विकल्प निस्कन सक्छ……’(ऐँऐँ पृ. ५०९–५१०)
बामदेव धेरै पढेलेखेका नेता होइनन्, जेनतेन मेट्रिक सम्मको पढाइ होला । तर एउटा कुरा कम्युनिष्टहरूको मान्नैपर्छ । तिनीहरू आफ्नो रुचि र आवश्यकताको विषयचाहिँ पढ्ने गर्छन् र कलम पनि चलाउँछन् । उनका लेखहरूको सँगालो (पुस्तक) प्रकाशित भयो । यिनलाई आफ्नै पार्टीभित्र संसदको निर्णयका लागि सुरा, सुन्दरी र पैसाको चलखेल गराएको भन्नेदेखि जुवाडे शैली अपनाएको आरोप हराएको छैन । अध्ययनशील, लेखन् र चिन्तनमा रुची राख्ने, आँटिलो निर्णय गर्नसक्ने, आत्मविश्वासका साथ धाराप्रवाह बोल्ने, आफ्ना सहयोगी वा कार्यकर्तालाई जुनसुकै हालतमा पनि संरक्षण र सहयोग गर्न तत्पर हुने, निडर र हक्की स्वभाव नेतामा हुनैपर्छ जो बामदेवमा छन् ।
प्युठानका उपाध्याय गौतम परिवार बर्दिया बसाईँ झर्यो । पुष्पलालका घनिष्ट सहयोद्धा तनहूँका एकदेव आलेकी नातिनी तुलसा थापासँग यिनको विवाह भयो । विवादसँग झुत्ती खेल्न रमाउने बामदेवलाई कसैले निर्विवाद भन्नु चोर कुरा हो । यही नै बामदेवलाई चिनाउने विशेषता पनि हो ।
वैवाहिक जीवन कसरी खुशी राख्ने ? यस्ता छन्, उपाय